सीपी मैनालीलाई प्रचण्डले राप्रपाको अध्यक्ष बन्नुस् भनेपछि… « Sansar News
१५ मंसिर २०७८, बुधबार १४:२६
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजा महेन्द्रको प्रसंशा गर्ने नेकपा (माले)का अध्यक्ष सीपी मैनालीमाथि कटाक्ष गरेका छन् । राप्रपाको महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा उनले ‘राप्रपाको अध्यक्ष बन्नुस्’ भन्दै मैनालीमाथि कटाक्ष गरेका हुन् ।
सुरुमा गणतन्त्रका लागि आफैंले मान्छेको टाउको काट्न सुरु गरेको स्मरण गराउँदै सीपीलाई प्रचण्डले भने– ‘राजतन्त्र फाल्न सुरुमा मान्छेका टाउको काट्ने सीपीजीले महान राजा भनेर बोल्नुभयो। उहाँ राप्रपाको अध्यक्ष बन्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ क्यारे ! शुभकामना। त्यस्तै हो भने बधाई छ सीपीजी सजिलै बोल्नुभयो।’
प्रचण्डले राष्ट्रियताको विषयमा भने राप्रपासँग माओवादी केन्द्र नजिक रहेको बताए । प्रचण्डले आफू झुट नबोल्ने भन्दै आफूले धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रवादमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे ।
प्रचण्डले अग्रगामी एजेण्डामा सबैसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
के भनेका थिए मैनालीले ?
राप्रपा महाधिवेशनको उद्घाटनलाई सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा माले महासचिव मैनालीले राजा महेन्द्रले राष्ट्रियताको सबालमा ठूलो त्याग गरेको बताएका थिए । महेन्द्रको कारण नै नेपाल सिक्किम हुनबाट जोगिएको उनको भनाई थियो ।
मैनालीले महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी नेता भनेका थिए । ‘सिंगो नेपाल भारतमा गाभिएको सिक्किमजस्तो हुनबाट रोक्न पृथ्वीनारायण शाहपछि कसैले कदम चालेको छ भने त्यो राजा महेन्द्रले नै हो’, उनले भनेका थिए, ‘संविधानसभा हाम्रो ७ दशकदेखिको एजेण्डा भनेर नेताहरुले भन्दै आउनु भएको छ, ००९/०१० सालमा संविधानसभा गर्न पाएको भए नेपाल सिक्किम भइसक्थ्यो । महेन्द्रले त्यो बुझेर तुहाइदिनुभयो । सीपी मैनाली राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी भन्छ ।’
प्रचण्डको अभिव्यक्तिबाट मैनाली खिन्न
राप्रपाको अध्यक्ष बन्नुस् भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्ति पछि मैनालीमा खिन्नता देखिएको छ । प्रचण्ड पछि बोल्ने वक्ताहरुले पनि पटक–पटक त्यहि विषयलाई उठाईँरहँदा मैनालीमा निकै मलिनपना देखिएको थियो ।
राप्रपाका नेताहरुले मैनालीको प्रशंसा गर्दा हलबाट हुटिङ्ग र ताली पनि बजेको थियो ।